Reer Binu Israaʼiil Boqor Bay Codsadeen | Farriinta Kitaabka
Reer Binu Israaʼiil Boqor Bay Codsadeen
Saaʼuul oo ahaa boqorkii ugu horreeyay oo reer binu Israaʼiil Yehowah wuu khilaafay. Dabadeed Daaʼuud baa Boqor noqday Ilaahayna boqortooyo weligeed jiraysa buu axdi kula galay
XILLIGII Samsoon dabadeed nebi Samuuʼeel baa reer binu Israaʼiil u talin jiray. Reer binu Israaʼiil Samuuʼeel bay u yimaaddeen oo waxay ku adkaysteen in boqor binuʼaadmi ah la siiyo sida quruumaha kale. Inkastay Yehowah codsigooda kaga cadhaysiiyeen wuxuu Samuuʼeel u sheegay inuu dhegeysto codka dadka. Ilaahay wuxuu boqor uga dhigay nin isla hooseeya oo Saaʼuul la yiraahdo. Waqti kaddib Saaʼuul wuu kibray oo wuu caasiyoobay. Yehowah wuu u diiday inuu sii ahaado boqor. Samuuʼeel wuxuu ku amray inuu nin dhallinyaro ah oo Daaʼuud la dhaho boqor ka dhigo. Haddaba muddo dheer bay qaadatay ilaa uu Daaʼuud boqor noqday.
Markuu Daaʼuud weli dhallinyaro ahaa wuxuu booqday walaalihiis ciidanka Saaʼuul ku jiray. Ciidankii dhammaantood waxay aad uga cabsanayeen nin dagaalyahan ah oo aad u weyn. Cadaawahan lagu magacaabay Goliʼad wuxuu caayay iyaga oo dhan iyo Ilaahoodaba siday ula dagaallamaan. Markuu Daaʼuud waxan maqlay aad buu u cadhooday oo wuu oggolaaday inuu la dagaallamo. Ninkan dheerarkiisa saddexda mitir u dhow yahay buu u tegay isagoo wadhaf iyo dhowr dhagax wata. Goliʼad wuu ku jeesjeesay haddaba Daaʼuud wuxuu yiri: ‘Adigu waxaad ii soo qaadatay seef iyo waran iyo hoto aniguse waxaan kuula imid magaca Yehowah Ilaah!’ (1 Samuuʼeel 17:45) Daaʼuud dhagax keliya buu Goliʼad ku dilay oo markaana seeftiisii intuu ka qaaday buu madaxa kaga gooyay. Reer Falastiin cabsi bay la wada carareen.
Bilowgii geesinimada Daaʼuud way la wanaagsanayd Saaʼuul oo ciidankiisa buu madax uga dhigay. Haddaba Saaʼuul aad buu uga masayray horumarka Daaʼuud. Waxay noqotay inuu Daaʼuud noloshiisa la baxsado oo sanado badan dhuumasho ku noolaado. Daaʼuud wuxuu ogaa in Yehowah Ilaah doortay Saaʼuul. Sidaas darteed daacad buu weli u ahaa boqorkan doonayay inuu dilo. Aakhirkii Saaʼuul dagaal buu ku dhintay. Waqti yar gudihiis Daaʼuud baa boqor noqday siduu Yehowah ballanqaaday.
“Xoog baan u yeeli doonaa carshiga boqortooyadiisa weligiis.”—2 Samuuʼeel 7:13
Markuu boqor noqday Daaʼuud wuxuu aad u doonayay inuu Yehowah macbud u dhiso. Laakiin Yehowah Daaʼuud wuxuu u sheegay in dhashiisa mid ka mid ah gurigan dhisi doono. Sulaymaan wiilkii Daaʼuud baa midkaas ahaa. Inkastaba Ilaahay Daaʼuud wuu u abaalguday oo wuxuu la dhigtay axdi weyn. Daaʼuud reerkiisa waxaa ka soo farcami doono boqortooyo aan mid la mid ah jirin. Ugu dambeyn reerkiisa waxa ka dhalan doono Badbaadiyaha oo ahaa Farcankii lagu ballanqaaday beertii Ceeden. Midkaas wuxuu noqon doonaa Masiixa oo ka dhigan “Kan Subkan” oo uu Ilaahay doortay. Yehowah wuxuu ballanqaaday in Masiixa noqon doono Hoggaamiyaha Boqortooyo oo ah dowlad weligeed jiraysa.
Daaʼuud Yehowah aad buu ugu mahadnaqay oo wuxuu ururiyay dahab iyo lacag badan iyo alaabtii dhismada macbudka loogu baahnaa oo dhan. Wuxuuna qoray sabuurro badan oo ku ahaaday ruuxa Ilaahay oo markii noloshiisa dhammaadkeeda la soo gaaray Daaʼuud wuxuu yiri: “Rabbiga ruuxiisii baa iga dhex hadlay, oo eraygiisiina carrabkayguu saarnaa.”—2 Samuuʼeel 23:2.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay 1 Samuuʼeel; 2 Samuuʼeel; 1 Taariikhdii; Ishacyaah 9:7; Matayos 21:9; Luukos 1:32; Yooxanaa 7:42.
Yehowah Boqor Saaʼuul muxuu ugu beddelay Daaʼuud?
Daaʼuud dabeecad sidee ah buu muujiyay intuunan boqor noqon?
Waa ayo Farcanka Badbaadiyaha ah oo la ballanqaaday inuu Daaʼuud ka soo farcami doono?
Reer binu Israaʼiil laba boqortooyo maxay ugu kala qaybsameen?
Wadaag Wadaag Reer Binu Israaʼiil Boqor Bay Codsadeen